ch 15 မဿဲ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း / ch 15 မဿဲ
15:1 Then the scribes and the Pharisees came to him from Jerusalem, ဟုဆို:
15:3 But responding, သူတို့ပြောဆို: “And why do you transgress the commandment of God for the sake of your tradition? For God said:
15:4 ‘Honor your father and mother,'နှင့်, ‘Whoever will have cursed father or mother shall dieadeath.’
15:7 Hypocrites! How well did Isaiah prophesy about you, ဟုဆို:
15:10 And having called the multitudes to him, သူတို့ပြောဆို: “Listen and understand.
15:15 ထိုအကိုတုံ့ပြန်, ပေတရုအားမိန့်, “Explain this parable to us.”
15:16 သို့သော်သူကပြောသည်: “Are you, အခုတောင်မှ, without understanding?
15:21 ထိုအရပ်၌ထံမှ ထွက်., ယရှေုသညျတုရုမြို့နှင့်ဇိဒုန်မြို့များ၏ဒေသများတွင်သို့နုတ်ထွက်.
15:22 ထိုအခါ, ခါနာန်၏အမျိုးသမီးတစ်ဦး, ထိုအရပ်မှထွက်သွား, အော်ဟစ်, သူ့ကိုဟု: "ငါ့ကိုသနား ယူ., သခင်ဘုရားသည်, ဒါဝိဒ်၏သားတော်ဖြစ်သည်. ငါ့သမီးဆိုးဆိုးရွားရွားနတ်ဆိုးစွဲသဖြင့်ညှဉ်းဆဲဖြစ်ပါတယ်။ "
15:23 သူကမိန်းမအားတစ်ဦးစကားလုံးမပြောခဲ့ပါဘူး. ထိုအခါတပညျ့တျောတို့သ, အနီး drawing, သူ့ကိုအသနားခံ, ဟုဆို: "သူမ၏ဖယ်ထုတ်ပါ, သူမကျွန်တော်တို့ကိုအပြီးအော်ဟစ်သည်။ "
15:24 ထိုအကိုတုံ့ပြန်, ဟုသူကပြောသည်, "ငါသည်ရှားဣသရေလအမျိုး၏အိမ်တော်ထဲကလဲသေကြပြီသူကိုသိုး မှလွဲ. မပို့ဖြစ်ခဲ့ပါ။ "
15:25 သို့သော်သူမသူ့ကိုချဉ်းကပ်နှင့် adored, ဟုဆို, "သခင်, ကူညီပါ။"
15:26 ထိုအကိုတုံ့ပြန်, ဟုသူကပြောသည်, "ဒါဟာသားသမီးများ၏မုန့်ကို ယူ. ခွေးအားပစ်ရန်မကောင်းမသင့်ဖြစ်၏။ "
15:27 ဒါပေမယ့်လို့သူကပြောပါတယ်, "ဟုတ်တယ်, သခင်ဘုရားသည်, ဒါပေမယ့်လူငယ်ခွ​​ေးလည်းမိမိသခင်၏စားပွဲမှကျကြသောအစအနမှကိုစားကြလော့။ "
15:28 ထိုအခါယေရှုသည်, ကိုတုံ့ပြန်, သူမ၏ဖို့ပြောပါတယ်: "အိုအမြိုးသမီး, သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည်ကြီး. ။ ဒါကြောင့်သင်အလိုရှိ၏နည်းတူသင်တို့အဘို့ပြုပါစေ "ထိုအခါသမီးဖြစ်သူကအလွန်နာရီကနေအနာကိုငြိမ်းစေခဲ့.